OD | Mg Ogga's Notes
အခုချိန် ပရဟိတလူငယ် အဖွဲ့လေးတွေများစွာ ပေါ်ပေါက်လာတာ အားရစရာ။ ဒါပေမယ့် ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့ အတော်အများ အကြောင်းကြောင့် စနစ်တကျ မလုပ်နိုင်တာတွေရတယ်။ အဖွဲ့တိုင်း အဖွဲ့တိုင်း အစည်းဝေးတွေ လုပ်ပြီး ဘာမှလည်း မထူး အလုပ်ရှုပ်တယ် ဟိုကွေ့ ဟိုတက်နဲ့ လှော် ဒီကွေ့ ဒီတက် နဲ့ လှော်ဆိုတာမျိုးတွေ ကြားနေရတော့ ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့စည်းတွေမှာ အစည်းဝေးဘယ်လို လုပ်သင်တယ် ဆိုတာ ကို သိထားသလောက်လေး မျှဝေ လိုက်ပါတယ်။ သိပြီးသား တတ်ပြီးသား မဟာ့ မဟာ ဆရာ့ ဆရာ ကြီးများအတွက် မရည်ရွယ်ပါ။ ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး လူငယ်ပရဟိတ အဖွဲ့များအတွက်သာ……………………. အစည်းဝေးဆိုတာ ကျနော်တို့ လူမူ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အစည်းအဝေးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ လပတ်အစည်းဝေး၊ နှစ်လယ် အစည်းဝေး၊ နှစ်ပတ်လည် အစည်းဝေးဆိုတဲ့…
June 27, 2013 in လူမှုဖွံဖြိုးရေး, ဆောင်းပါး.
အဖွဲ့စည်း ဖွံဖြိုးတိုးတက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ
ဒီစာကို ကျွန်တော်အကိုကြီး ကိုသံချောင်း ပါဝင်ခဲ့တဲ့ လူဆိုးလေးများ အဖွဲ့ Bad Boy အဖွဲ့ ကို အာဖို့ ပြင်ထားတဲ့ ဟာပါ။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သူတို့ကို မအာဖြစ်လိုက်ရပါ။ ဒါပေမယ် အခု လူမှုရေးအဖွဲ့ ဟိုအဖွဲ့ဒီအဖွဲ့ တွေ အလျိုလျိုပေါ်လာတာကြောင့် သူတို့ အတွက် အသုံးများဝင် မလား ဆိုပြီးပြီး ပြန်ပြီးနဲနဲ ဆီစမ်း နှမ်းဖြူးထားတာပါ။ သိလို တတ်လို့ ကျွမ်းလို့ ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ သိပြီးသား များ တတ်ပြီးသားများ မလိုဘူးထင်သူများ ဆရာကြီးများဖတ်စရာမလိုပါ။ အဖွဲ့ဆိုတာ ဘာလဲ ၃ယောက်နဲ့ သုံးယောက်ထက်ပိုတဲ့ အစုအဝေကို အဖွဲ့လို့ ခေါ်ပါသည်။ တစ်ယောက်တည်းကို တစ်ယောက် တည်းဟုခေါ်သည်။ နှစ်ယောက်ကို အတွဲလို့ခေါ်သည်။ ၃ ယောက် နဲ့ အထက်…